Himalaya Dainik » बलिउडका यी ५ कलाकार, जो करियर उचाईमा पुगेका बेला रोजे मृत्युको बाटो
बलिउडका यी ५ कलाकार, जो करियर उचाईमा पुगेका बेला रोजे मृत्युको बाटो
सुशांत सिंह राजपूतको आकस्मिक मृत्युको कारण उनको परिवारको सदस्य जान्न चाहन्छन्। तर सुशान्त मात्र यस्तो कलाकार हैनन् जसले आ त्मह-त्या गरेका हुन्। बलिउडमा यस्तै चार कलाकारले आ त्मह त्या गरेर आफ्नो फ्यानलाई नपत्याउने बनाएका छन्।
१. जिया खान:
१३ जुन २०१३ मा जिया खानको श-व मुम्बईको जुहू स्थित उनको घरको बेडरूमको पंखामा झु-न्डि’एको अवस्थामा भेटिएको थियो। जियाको घरमा सु-सा’इड नोट पनि भेटिएको थियो।
उनले आफ्नो प्रेमी सूरज पंचोलीलाई आफ्नो मृ-त्युको आ’रोप लगाएकी थिइन् । २०१६ सालमा सीबीआईले जियाको मृ-त्युलाई आ-त्मह-त्या पुष्टि गरेको थियो। जियाले ३ बलिउड फिल्ममा काम गरेकी थिइन् जसमा निशब्द,गजिनी र हाउसफुल रहको छ ।
२ . प्रत्युशा बैनर्जी:
अप्रिल २०१६ मा बालिका वधू फेम प्रत्युशा बैनर्जीको मुम्बई स्थित उनको घरमा मृ-त्यु भएको थियो । उनको मृ त्यु दम घटनुको कारण भएको थियो । उनी ग-र्भवती पनि थिइन् र उनले आफ्नो मृ त्यु हुनुभन्दा अगाडी ग*र्भपात गरेकी थिइन् ।
उनको मृ-त्युपछि ग-र्भपातको खबर मिडियामा आएको थियो। मृ त्यु हुनुभन्दा पहिला उनी अभिनेता राहुल राज सिंहलाई डेट गरिरहेकी थिइन् र यी दुईको बिहे हुने कुरा पनि थियो ।
३. दिव्या भारती:
५ अप्रिल १९९३ मा १९ वर्षको उमेरमा चर्चित अभिनेत्री दिव्या भारतीले बम्बईको अंधेरी स्थित आफ्नो घरको बालकनीबाट कुदेर आ-त्मह-त्या गरेकी थिइन् । पो-स्टमार्टम रिपोर्टमा उनको मृ त्युको कारण टा-उकोमा ग-म्भीर चो-ट र आन्तरिक र-क्तस्रा-व बताईएको थियो ।
७ अप्रिल १९९३ मा विले पार्ले स्थित शमशान घा टमा उनको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। मुम्बई पुलिसले १९९८ मा यस केसलाई बन्द गर्दै यस मृ-त्युलाई एक अकस्मात नि धन बताएको थियो।
४.सुशान्त सिंह राजपूत:
१४ जुन २०२० मा सुशान्तलाई मुम्बईको बांद्रा स्थित आफ्नो घरमा झु-न्डि-एको अवस्थामा मृ-त भेटिएका थिए । सुशान्तको मृ-त्युको बारेमा अहिलेसम्म केहि पत्ता लागेको छैन र दिन प्रतिदिन उनको लागि न्यायको माग भईरहेको छ। सुशान्तलाई बलिउडको एक चर्चित कलाकारको रुपमा चिनिन्छ।
उनको मृ त्युको कारण लाखौँ फ्यानहरु दुखी छन्। सुशान्तको मृ त्युपछि बलिउडमा कैयौँ प्रश्न उठेको छ। यधपी अहिलेसम्म मुम्बई पुलिस र विहार पुलिसले यस केसको जाँच गरिरहेका छन् तर अर्को सीबीआई जाँचको माग भईरहेको छ।
१० अक्टुबर १९६४ मा ३९ वर्षको उमेरमा चर्चित अभिनेता, फिल्म निर्देशक र फिल्म निर्माता गुरु दत्तलाई बम्बईको पेडर रोड स्थित आफ्नो घरमा मृ त भेटिएको थियो । गुरु दत्त र-क्सी र निन्द्रा लाग्ने औ-षधी मिलाएर खाने गर्थे । उनको मृ-त्यु आ त्मह-त्या वा एक आ-कस्मिक मृ-त्यु पनि मानिन्छ।
दिवंगत अभिनेताको छोरा अरूण दत्तले पनि आफ्नो पिताको मृ त्युलाई एक घ टना बताएका थिए। उनको केहि लोकप्रिय फिल्ममा साहिब बीबी और गु-लाम, कागज़ के फूल, प्यासा और चौदहवीं का चांद रहेको छ।